Sahirana i Madagasikara Tena ilaina famatsiam-bola
7.036,80 miliara Ar ny fampidiram-bolam-panjakana amin’ny alalan’ny hetra sy ny fadintseranana izay nokajikajiana ho tratra voarakitra tao anatin’ny lalànan’ny tetibola.
Raha ny fampidiran-ketra fotsiny dia 4029 Miliara Ariary no vinavinaina hotratrarina tamin’ity taona ity. Tsy ho tratra mihitsy anefa izany noho ny fikatsoan’ny toekarena sy ny asa fihariana rehetra ka 5000 miliara Ariary sisa no hezahana hotratrarina amin’ny hetra sy fadin-tseranana. Nidina hatramin’ny 29% araka izany ary mety hitotongana hatrany raha hihoatra ny 3 volana ny tsy fandehanan’ny toekarena amin’ny tokony ho izy araka ny fanambarana. Etsy andaniny anefa dia tsy maintsy mamoaka vola hatrany ny fitondram-panjakana hanohizana ny fanampiana ara-tsosialy noho ny krizy ary tafiakatra hatrany amin’ny 724 miliara Ariary izany fanomezana izany. Noho izany rehetra izany dia tsy maintsy mitady sy miandry famatsiam-bola avy any ivelany hatrany i Madagasikara.